Baolina kitra :: Hijery ny toetr’ireo kianja i Nicolas Dupuis • AoRaha
Baolina kitra Hijery ny toetr’ireo kianja i Nicolas Dupuis
Hanomboka ny asa amin’ny maha mpanolotsaina sy mpanoro hevitry ny ministeran’ny Tanora sy ny Fantanjahantena (MJS) azy i Nicolas Dupuis. Handeha hijery ny fandrosoan’ny fanamboarana an’ireo kianja nampanantenain’ny filoham-pirenena itsy farany, araka ny vinavinanasany sy ny MJS. Handeha hidina any amin’ireo faritany enina izy, sady hijery an’ireo mpilalao manan-talenta amin’ny baolina kitra, latsaky ny efatra sy dimy ambin’ny folo taona.
“Manomana ny fijerena an’ireo asa fanamboarana an’ireo kianja roa amby telopolo any amin’ny faritra rehetra izahay, amin’izao fotoana izao. Hojerena ireo mpilalao zandriny misongadina amin’ny fananana vatana sy mahay ny ara-teknika amin’ny baolina kitra ”, hoy ity teknisianina frantsay ity.
Mpilalao roa amby dimampolo isaky ny faritra no havondrona hampidirana amin’ilay akademia eto Antananarivo. “Hanomboka, amin’ny 1 septambra 2020, ny asa fanamboarana an’ilay akademia. Manana fotoana malalaka tsara izahay hijerena an’ireo mpilalao hampidirina ao”, araka ny namaranany.
Baolina kitra – Fifindrana Manomboka be mpitady any ivelany ny mpilalao malagasy
Kitra – “Arab cup of nation 2020” :: Hanafika any Arabia Saodita ny Barea latsaky ny 20 taona
Baolina kitra « Arabe cup of nation 2020 » :: Hifandona voalohany amin’i Djibouti i Madagasikara